တစ်နေ့မှာ ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးဟာ နွားတစ်ကောင်ကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ် – WunYan
တစ်နေ့မှာ ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးဟာ နွားတစ်ကောင်ကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်
Posted on January 11, 2018 by whuk-46651
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ခင်ဗျာ . . . ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးဟာတစ်နေ့မှာ နွားတစ်ကောင် ဖန်ဆင်းလိုက်သတဲ့..။ ပြီးတော့ နွားကိုပြောတယ်… “မင်းလယ်ထဲမှာ တစ်နေကုန် လယ်သမားတွေအတွက် လယ်ထွန်ပေးရမယ်..။ မြက်ပဲစားရမယ်..။ မင်းကို သက်တမ်း နှစ် ၅၀ ပေးမယ်..။”
နွားက ကန့်ကွက်တယ်.. “ကျွန်တော် အဲလောက် ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ရပြီးမှ၊ မြက်ပဲစားရမယ်ဆိုတော့ သက်တမ်း နှစ်၂၀ပဲယူမယ်..။ ပိုတာ ပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါ..။” ဖန်ဆင်းရှင်က သဘောတူလိုက်တယ်..။
နောက်တစ်ရက်မှာ မျောက်တစ်ကောင် ဖန်ဆင်းပြန်သတဲ့..။ ပြီးတော့ ပြောတယ်..။ “မင်းလူတွေကို ပျော်တော်ဆက်ရမယ်၊ သူတို့ ရယ်မောအောင် မင်းလုပ်ပေးရမယ်..။ ကျွမ်းထိုးပြရမယ်..၊ ငှက်ပျောသီးစားရမယ်၊ သက်တမ်း နှစ်၂၀ပေးမယ်..။”
မျောက်က ကန့်ကွက်ပြန်တယ်… “ပျော်တော်ဆက်ရမယ်၊ ကျွမ်းလည်းထိုးပြရမယ်၊ ငှက်ပျောသီးပဲစားရမယ်ဆိုတော့ ပင်ပန်းလွန်းတယ် သက်တမ်း ၁၀နှစ်ဆိုရပါပြီ” ဖန်ဆင်းရှင်က သဘောတူလိုက်ပြန်တယ်..။
တတိယရက်မှာ ခွေးတစ်ယောက် ဖန်ဆင်းပြန်သတဲ့… ပြီးတော့ ပြောတယ်.. “အိမ်ပေါက်ဝမှာ ဟောင်ပေးရမယ်၊ အိမ်ရှင်တွေပိုတဲ့ စားကြွင်းစားကျန်တွေ စားရမယ်..။ မင်းကို ၂၅နှစ် သက်တမ်းပေးမယ်..။”
ခွေးက ကန့်ကွက်သတဲ့… “တစ်နေကုန်အိမ်ရှေ့ပေါက်မှာ ထိုင်ဟောင်ပေးရမယ်..၊ ဟုတ်လား၊ ၁၅နှစ်ဆိုလောက်ပါပြီဗျာ၊ ပိုတာပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါ..။” ဖန်ဆင်းရှင်က သဘောတူလိုက်ပြန်တယ်.။
စတုတ္ထရက်မှာ လူတစ်ယောက် ဖန်ဆင်းလိုက်သတဲ့..။ ပြီးတော့ ပြောတယ်… ” မင်း တစ်နေကုန် ဘာအလုပ်မှ လုပ်စရာမလိုဘဲ ၊ အိပ်လိုက် စားလိုက်၊ ပျော်လိုက်ပါးလိုက်နဲ့ ဘ၀ကို အရသာခံနေရုံပဲ၊ မင်းကို သက်တမ်း နှစ် ၂၀ပေးမယ်..။”
လူက ကန့်ကွက်တယ်..။ “ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဘ၀ နှစ် ၂၀ဆို တိုလွန်းပါတယ်..” ဖန်ဆင်းရှင် နှုတ်ဆိတ်နေတယ်..။ လူက ဖန်ဆင်းရှင်ကို ပြောတယ်… “ဒီလိုလုပ်ပါလား..၊ နွားက အနှစ် ၃၀ပြန်ပေးသွားတယ်.၊ မျောက်က ၁၀နှစ်၊ ခွေးက ၁၀နှစ် ပြန်ပေးသွားတယ်။ အဲနှစ်တွေ အကုန်လုံး ကျွန်တော့ကို ပေးလိုက်ပါလား၊ အာ့ဆို ကျွန်တော် နှစ် ၇၀လောက် နေလို့ ရသွားပြီ” ဖန်ဆင်းရှင် က သဘောတူလိုက်တယ်..။
အဲဒါတွေဟာ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဘ၀အစရဲ့ နှစ် ၂၀ မှာ စားလိုက်သောက်လိုက်၊ ပျော်လိုက်ပါးလိုက်နဲ့ နေရပြီး။ နောက် နှစ် ၃၀ လုံးလုံး နွားလိုရုန်းကန်ပြီး မိသားစုကို လုပ်ကျွေး။ နောက် ၁၀မှာ ပင်စင်ယူသွားပြီးနောက် မျောက်လိုမျိုး မြေးတွေ ကိုရယ်မောအောင် ပျော်တော်ဆက် ထိန်းကျောင်းရ၊။ နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်မှာ တစ်နေကုန် အိမ်မှာပဲနေပြီး အိမ်စောင့်နေရလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေပါပဲ..။
Credit : Moe Oo Wathan
ဟိုးရှေးရှေးတုနျးကပေါ့ခငျဗြာ . . . ဖနျဆငျးရှငျကွီးဟာတဈနမှေ့ာ နှားတဈကောငျ ဖနျဆငျးလိုကျသတဲ့..။ ပွီးတော့ နှားကိုပွောတယျ… “မငျးလယျထဲမှာ တဈနကေုနျ လယျသမားတှအေတှကျ လယျထှနျပေးရမယျ..။ မွကျပဲစားရမယျ..။ မငျးကို သကျတမျး နှဈ ၅၀ ပေးမယျ..။”
နှားက ကနျ့ကှကျတယျ.. “ကြှနျတျော အဲလောကျ ပငျပငျပနျးပနျး လုပျရပွီးမှ၊ မွကျပဲစားရမယျဆိုတော့ သကျတမျး နှဈ၂၀ပဲယူမယျ..။ ပိုတာ ပွနျသိမျးထားလိုကျပါ..။” ဖနျဆငျးရှငျက သဘောတူလိုကျတယျ..။
နောကျတဈရကျမှာ မြောကျတဈကောငျ ဖနျဆငျးပွနျသတဲ့..။ ပွီးတော့ ပွောတယျ..။ “မငျးလူတှကေို ပြျောတျောဆကျရမယျ၊ သူတို့ ရယျမောအောငျ မငျးလုပျပေးရမယျ..။ ကြှမျးထိုးပွရမယျ..၊ ငှကျပြောသီးစားရမယျ၊ သကျတမျး နှဈ၂၀ပေးမယျ..။”
မြောကျက ကနျ့ကှကျပွနျတယျ… “ပြျောတျောဆကျရမယျ၊ ကြှမျးလညျးထိုးပွရမယျ၊ ငှကျပြောသီးပဲစားရမယျဆိုတော့ ပငျပနျးလှနျးတယျ သကျတမျး ၁၀နှဈဆိုရပါပွီ” ဖနျဆငျးရှငျက သဘောတူလိုကျပွနျတယျ..။
တတိယရကျမှာ ခှေးတဈယောကျ ဖနျဆငျးပွနျသတဲ့… ပွီးတော့ ပွောတယျ.. “အိမျပေါကျဝမှာ ဟောငျပေးရမယျ၊ အိမျရှငျတှပေိုတဲ့ စားကွှငျးစားကနျြတှေ စားရမယျ..။ မငျးကို ၂၅နှဈ သကျတမျးပေးမယျ..။”
ခှေးက ကနျ့ကှကျသတဲ့… “တဈနကေုနျအိမျရှပေ့ေါကျမှာ ထိုငျဟောငျပေးရမယျ..၊ ဟုတျလား၊ ၁၅နှဈဆိုလောကျပါပွီဗြာ၊ ပိုတာပွနျသိမျးထားလိုကျပါ..။” ဖနျဆငျးရှငျက သဘောတူလိုကျပွနျတယျ.။
စတုတ်ထရကျမှာ လူတဈယောကျ ဖနျဆငျးလိုကျသတဲ့..။ ပွီးတော့ ပွောတယျ… ” မငျး တဈနကေုနျ ဘာအလုပျမှ လုပျစရာမလိုဘဲ ၊ အိပျလိုကျ စားလိုကျ၊ ပြျောလိုကျပါးလိုကျနဲ့ ဘဝကို အရသာခံနရေုံပဲ၊ မငျးကို သကျတမျး နှဈ ၂၀ပေးမယျ..။”
လူက ကနျ့ကှကျတယျ..။ “ဒီလောကျကောငျးတဲ့ဘဝ နှဈ ၂၀ဆို တိုလှနျးပါတယျ..” ဖနျဆငျးရှငျ နှုတျဆိတျနတေယျ..။ လူက ဖနျဆငျးရှငျကို ပွောတယျ… “ဒီလိုလုပျပါလား..၊ နှားက အနှဈ ၃၀ပွနျပေးသှားတယျ.၊ မြောကျက ၁၀နှဈ၊ ခှေးက ၁၀နှဈ ပွနျပေးသှားတယျ။ အဲနှဈတှေ အကုနျလုံး ကြှနျတော့ကို ပေးလိုကျပါလား၊ အာ့ဆို ကြှနျတျော နှဈ ရ၀လောကျ နလေို့ ရသှားပွီ” ဖနျဆငျးရှငျ က သဘောတူလိုကျတယျ..။
အဲဒါတှဟော ဘာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ ဘဝအစရဲ့ နှဈ ၂၀ မှာ စားလိုကျသောကျလိုကျ၊ ပြျောလိုကျပါးလိုကျနဲ့ နရေပွီး။ နောကျ နှဈ ၃၀ လုံးလုံး နှားလိုရုနျးကနျပွီး မိသားစုကို လုပျကြှေး။ နောကျ ၁၀မှာ ပငျစငျယူသှားပွီးနောကျ မြောကျလိုမြိုး မွေးတှေ ကိုရယျမောအောငျ ပြျောတျောဆကျ ထိနျးကြောငျးရ၊။ နောကျထပျ ၁၀ နှဈမှာ တဈနကေုနျ အိမျမှာပဲနပွေီး အိမျစောငျ့နရေလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှရေဲ့ အဖွပေါပဲ..။